Ibeta yamva nje yoMculo we-Apple ye-Android ihluza ikamva le-Apple Classical | Iindaba ze-iPhone
Ibeta yamva nje yeApple Music ye-Android ivuza iApple Classical yexesha elizayo
Sele sikuxelele ngezihlandlo ezininzi ukuba i iinkonzo zedijithali Baye beza kuhlala kwindawo ebaluleke kakhulu kwingeniso yabafana baseCupertino. Iinkonzo ezisusela kugcino lwe-iCloud ukuya kwiinkonzo zomxholo wokusasaza njengeApple Music okanye iApple TV+. Ekugqibeleni, umrhumo ugcina umvuzo othembekileyo wenkampani kwaye kubonakala ngathi bafuna ukuqhubeka nokuyandisa. Entsha: U-Apple uza kucinga ngokuphehlelela i-Apple Classical, inkonzo entsha yokusasaza umculo weklasikhi.
Inyaniso kukuba kuye kwaba yinto eyothusayo, kwinguqulelo ye-beta yamva nje ye-Apple Music ye-Android a umgca wekhowudi Oko kuyakhankanya Vula kwi-Apple Classical, umgca obonisa ukubakho kwenkonzo entsha ye-Apple enikezelwe kumculo weklasikhi onokuza kwi-app eyahlukileyo, yiyo loo nto. Vula ngaphakathi... Kwaye inyaniso kukuba Ixesha elide bekukho intetho malunga nokuba kungenzeka ukuba i-Apple iqalise inkonzo yolu hlobo, ekugqibeleni bazama ukubheja ekwaneliseni i-audiophiles kakhulu kwaye baye bahlala bezama ukunyamekela ikhathalogu ye-Apple Music yomculo weklasikhi. Kwaye khumbula ukuba kunyaka ophelileyo UApple uthenge iPrimephonic, inkonzo yokusasaza umculo weklasikhi.
Siza kubona ukuba yintoni yonke le nto, njengoko sisitsho Ngaba kuya kufuneka silinde iinyanga ezimbalwa kuba inokuba yiNqaku eliPhambili elilandelayo WWDC lowo unyulwe ukuba abonise iindaba kwi-Apple Music malunga nale nkonzo yomculo weklasiki entsha. Inkonzo enokuba njalo idityaniswe kwiApple Music ngokwayo ukutshintshiselana ngokuhlawula imali eyongezelelweyo kwaye oko kunokuza kunye nohlaziyo loluhlu lweHomePod ukuze sonwabele umculo kubo bonke ubukhazikhazi bawo. Kwaye wena, Ngaba unomdla kwi-Apple Classical?
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iimveliso ze-Apple » Apple Music » Ibeta yamva nje yeApple Music ye-Android ivuza iApple Classical yexesha elizayo
I-Satechi Stand kunye ne-Hub ye-iPad Pro, yima kunye nalo lonke unxibelelwano
I-Tweetbot ifumana kwakhona izibalo zeetweets kuhlaziyo lwayo olutsha